WestGate ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည် Hitachi Kokusai မှ Z-HD5500 HDTV ကင်မရာများဖြင့် Multi-Campus Live Video Delivery ကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Hitachi Kokusai ကနေ Z-HD5500 HDTV ကင်မရာများကိုနှင့်အတူ Westgate ဘုရားကျောင်း Enhancer Multi-ကျောင်းပရဝုဏ်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယို Delivery
Hitachi Kokusai ကနေ Z-HD5500 HDTV ကင်မရာများကိုနှင့်အတူ Westgate ဘုရားကျောင်း Enhancer Multi-ကျောင်းပရဝုဏ်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယို Delivery
ပိုပြီးပြောင်းလဲနေသောကဗီဒီယိုအတွေ့အကြုံများကိုဖန်တီးရန်ထုတ်လုပ်သူများဖွင့်စဉ်က New ကင်မရာများပုံရိပ်အရည်အသွေးမြှင့်
Woodbury, နယူးယော့, ဇွန်လ 28, 2019 - San Jose, ကယ်လီဖိုးနီးယား-ဧရိယာ Westgate ဘုရားကျောင်းမျိုးစုံမှမူရင်းနယူးယောက်မြို့စက်ရုံကျောင်းဝင်းကျော်လွန်ချဲ့ထွင်အမျှ ဂြိုဟ်တု တည်နေရာ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဗီဒီယိုအား၎င်း၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောတိုးတက်မှု၏အရေးပါသောပေးရန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယင်း၏ Multi-site ကိုထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုးတက်လာဖို့လိုက်ရှာ, အသင်းတော်ကနေနှစ်ခု Z-HD5500 HDTV စတူဒီယိုနှင့်ကွင်းဆင်းထုတ်လုပ်မှုကင်မရာများဝယ်ယူ Hitachi Kokusai လျှပ်စစ်အမရေိ, Ltd (Hitachi Kokusai) နှင့်ရလဒ်နှင့်အတူနှစ်သက်သောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
"ငါသည်ဘုရားကျောင်းပူးပေါင်းတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကနယူးယောက်မြို့စက်ရုံအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုထုတ် maxed နှင့် Multi-site ကိုသွား၏အိပ်မက်ခဲ့ဖူး," Kevan Long က, Westgate ဘုရားကျောင်းမှာထုတ်လုပ်မှုဒါရိုက်တာကဆိုသည်။ "ထည့်သွင်းခြင်း ဂြိုဟ်တု ကျောင်းဆီလီကွန်ဗယ်လီဒေသ၏အခြားအိတ်ကပ်ထဲသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်လှမ်းမမီတိုးချဲ့အတွက်အရေးကြီးခဲ့ပါတယ်နှင့်ဗီဒီယိုသူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုးကွယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ "
နယူးယောက်မြို့စက်ရုံ, တောင်ကုန်း Sunnyvale, နှင့်စပိန်ဘာသာစကား CASA က de Fe - - အပတ်တိုင်းန်ဆောင်မှုများတက်ရောက်ခြင်းထက်ပိုမို 3000 စုစုပေါင်းအသင်းတော်နဲ့အတိတ်ကာလသုံးနှစ်ကျော်အသစ်သောနေရာများတွင်ထည့်သွင်းခြင်း, Westgate ဘုရားကျောင်းယခုလေးကျောင်းခွဲများအထိချဲ့ကာ။ အဆိုပါ Sunnyvale တည်နေရာမှာညနပေိုငျးတက်ရောက်အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောဖမ်းမိတဲ့မှတ်တမ်းတင်စောင့်ကြည့်နေစဉ်အတွင်းဦးဆောင်သင်းအုပ်ဆရာစတိဗ် Clifford နှင့်အတူန်ဆောင်မှုများ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း, နယူးယောက်မြို့စက်ရုံ site ရဲ့ 800-ထိုင်ခုံကိုးကှယျမှုစင်တာကနေအစပြုတာနှင့်တောင်တောင်နှင့် CASA က de Fe မှငါးမိနစ်အချိန်နှောင့်နှေးနှင့်အတူထုတ်လွှင့်ကြသည် ထိုနေ့တွင်ပင်။
ဗွီဒီယိုရှိသူတို့၏မှီခိုတိုးလာသကဲ့သို့, ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း, သူတို့ကင်မရာတွေအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ "ကျနော်တို့မျိုးစုံက်ဘ်ဆိုက်များမှတိုးချဲ့အဖြစ်ကျနော်တို့ပိုကောင်းပုံရိပ်ကိုဖမ်းယူရညျအသှေးလိုအပျတဲ့," Long ကရှင်းပြသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိစက်ရုပ် PTZ ကင်မရာများတစ်ဦးမျှမျှတတလျောက်ပတ်သော 720p image ကိုဖန်တီး, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုစစ်မှန်တဲ့ထုတ်လွှင့်တန်းကင်မရာနှင့်အတူအများကြီးပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သိတယ်။ စက်ရုပ်ကင်မရာများနှင့်အတူစင်မြင့်ကိုဖြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့၏ကွန်မြူနတီအောက်ပါလည်းအလွန်ကောင်းသည်ကိုကြည့်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကိုသူတို့ဘောင်မှထွက်ခြေလှမ်းခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုကန့်သတ်ခြင်းငှါသူတို့ကိုမေးခဲ့ကြဘူး။ "
အဆိုပါဘုရားကျောင်းအသစ်ကကင်မရာများအကဲဖြတ်အဖြစ် low-အလင်းကိုင်တွယ်သော့ချက်စံအကြားတွင်လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ "ကျနော်တို့ကပူနွေးခံစားပေးရနည်းနည်းပုမှောင်ဘက်ခြမ်းပေါ်မှာ run ဖို့ပိုနှစ်သက်, အလင်းအိမ်နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏စင်မြင့်ရေလွှမ်းလိုပါဘူး" ဟု Long ကပြောခဲ့သည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်ကင်မရာများနိမ့်အလင်းအခြေအနေများတွင်အကြီးမဟုတ်ကြ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ပိုကောင်းအာရုံခံကိရိယာများနှင့် sensitivity ကိုအတူသူတွေကိုလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ "
ကိုးကွယ်မှု-oriented System Integration E2i ဒီဇိုင်းဟာ Westgate ဘုရားကျောင်းအဖွဲ့ Z-HD5500 အကြံပြုခဲ့သည်။ Z-HD5500 အချိန်တွင်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကဖြစ်သကဲ့သို့, Long ကအစောပိုင်းက Hitachi ကင်မရာမော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. ခဲ့ကြသည်, သူသည်ကြားသိဘယ်သို့သောအားဖြင့်အထင်ကြီးခဲ့အခြားသောအသင်းတော်များမိန့်မြွက်တော်မူ၏။ ဤရွေ့ကားထောက်ခံချက် Westgate ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်များအတွက် Z-HD5500s စံပြဖြစ်စေခြင်းငှါကင်မရာများ '' နည်းပညာဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အတူပေါင်းစပ်။
"ကုမ္ပဏီအဖြစ် Hitachi Kokusai တို့သည်ကြီးစွာသောဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ်, သူတို့ရဲ့ကင်မရာကနေဗီဒီယိုအကြီးအကြည့်," Long ကပြောခဲ့သည်။ "ဒီ Z-HD5500 ရဲ့အပြည့်အဝသည် frame rate ကို 1080p စွမ်းရည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်, နှင့်၎င်း၏ 62dB signal ကို-to-ဆူညံသံအချိုးတော်တော်လေးအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်စင်နှင့်အိမ်အလင်းရောင်နီးပါးလုံးဝ LED နေကြသည်အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောရဲ့ Refresh နှုန်းထားများမှာ LED မီးအလင်းရောင်၏စိန်ခေါ်မှုများကိုကိုင်တွယ်ရန်၎င်း၏အသစ်သောအာရုံခံကိရိယာရဲ့စွမ်းရည်ကိုလည်းအလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ခဲ့, ငါတို့သည်အနာဂတျမှာကို LED ကဗီဒီယိုရိုးကိုထည့်သွင်းဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ "
အဆိုပါ Z-HD5500s လွတ်လပ်စွာအကြောင်းကိုရွှေ့ဖို့ကိုသူတို့ On-ဇာတ်စင် communicators ဖွင့်စဉ်ကသူတို့ထုတ်ကုန်များ၏အမြင်အာရုံအရည်အသွေးကိုတိုးတက်အောင်, အသင်းတော်အဘို့အရှာဖွေနေခဲ့သည်အကျိုးကျေးဇူးများအပေါငျးတို့သကယ်လွှတ်ကြပြီ။ "ဟုအဆိုပါ Hitachi ကင်မရာများ၏ပုံရိပ်အရည်အသွေးရုံကြယ်, ငါတို့သည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြစ်မကြာမီကျနော်တို့ကသူတို့လယ်ပြင်၌ရှိသောအတိမ်အနက်နှင့်အနိမ့်အလင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျွန်တော်ယခင်ကရှိခဲ့သောအရာကိုထက်အများကြီးပိုကောင်းခဲ့ကြသောသူတို့အားအတွက်ထားအဖြစ်တွေ့မြင်နိုင်," Long ကချီးကျူးလိုက်သည်။ "စင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့၏ကွန်မြူနတီအတိုင်းလိုက်နာရန်စွမ်းရည်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောင်းနွမ်းသော့ခတ်-Down ရိုက်ချက်များထက်စောင့်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အောင်, တစ်ဦးထက်ပိုသောပြောင်းလဲနေသောဗီဒီယိုကအတှေ့အကွုံကိုဖန်တီးရန်ကျွန်တော်တို့ကို enabled သိရပါတယ်။ "
ချာ့ချ်၏ဗီဒီယိုအမှုထမ်းကင်မရာများ-class ကိုထုတ်လွှင့်အသစ်ခဲ့ကြသော်လည်း, သူတို့ကလေ့လာသင်ယူဖို့ Hitachi ကင်မရာများလွယ်ကူသောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ "ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးလအတွက်ခြစ်ခြစ်ကာလအတွင်းလေ့ကျင့်စောစောတို့သည် လာ. , ထို့နောက်အခြေခံထိန်းချုပ်မှုအပေါ်တစ်ဦး 30 မိနစ်အုပ်စုတစ်စုသင်တန်းကျင်းပ," Long ကပြန်ပြောပြ။ "ဒီအကူးအပြောင်းတော်တော်လေးချောမွေ့စွာရှိခဲ့သည်။ "
ရှည်လျားသော Z-HD5500s နှင့်အတူလုံးဝကျေနပ်မှုဖြစ်တယ်, ဘတ်ဂျက်နှင့်အာကာသလျှင်သန့်ရှင်းရာဌာနခွင့်ပြုမိန့်အတွက် Westgate ဘုရားကျောင်းရဲ့ဘဏ်ဍာနှစျခုထက်ပိုထည့်သွင်းဖို့ကိုချစ်လိမ့်မယ်။ "ကျွန်တော်တို့ဟာ Hitachi ကင်မရာများနှင့်အတူသွားကြဖို့လုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူပျြောရှငျဖြစ်နိုင်ဘူး" ဟုသူကအကျဉ်းချုံး။ "သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြားကျောင်းဝင်းအကြောင်းအရာပေးပို့အတွက်အရေးပါလှပေသည်နှင့်အလှည့်၌အကြှနျုပျတို့၏အသိုင်းအဝိုင်းရောက်ရှိအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ဝန်ကြီးဌာနကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီဖြစ်သောထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့အဖြစ်ပိုကောင်းကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြီ။ "
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-06-28
ယခင်: သြစတြေးလျအတွက် NOVA Entertainment ရဲ့ FM ရေဂီယာအခြေခံအဆောက်အအုံကိုခိုင်ခံ့စေရန် GatesAir
နောက်တစ်ခု: Alkemy X ကိုဘုံဘိုင်အိုင်တီဒါရိုက်တာအဖြစ် Rich Shurtliff